Raha Nandeha Nandevina Ny Renibeny Tany Bosnia Izy, Dia Tondraky Ny Rano Ny Tranony Tany Serbia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2014 4:27 GMT
Loza voajanahary goavambe iray nampiray ny vahoaka manerana ny faritra tao anaty fahoriana sy ny hirifiry, ny fifankatiavana ary ny fifankahazoana. Asehon'izy ireo ny toetra tsara indrindra any amin'izy ireo. Olona tena mahery fo izy ireo, ary tena namana tokoa.
Nanongotra ny zavatra ratsy rehetra ilay voina, ny ankosotra sy endrika ivelan'ny politika andavanandro, ny hazakazaka arahin-tosika iainantsika rehetra. Manjaka ny fahatsapana fa olombelona isika ary mifankahazo tsara daholo. Tonga nanolotra fanampiana tao Serbia sy Bosnia ny ekipan'ny vonjy taitra avy any Makedonia, Slovenia ary Croatia. Fa ny fanjakana tsinona tsy miraharaha izany. Fiainan'ny mponina andavanandro io.
Tonga avy hatrany ny fanampiana maneran-tany nohon'ny fisian'ny voina. Ny mpifanolo-bodirindrina akaiky indrindra aminay no tonga voalohany nanampy niaraka taminà milina, ekipa mpamonjy voina, fiara, sakafo sy rano. Saingy vao manomboka mihitsy ny ady atao hiverenana amin'ny fiainana andavanandro any amin'ny faritra tratry ny tondradrano. Very zavatra maro izahay. Ny sasany moa dia tena namoy ny fananany rehetra mihitsy.